उल्टो तर्क कोरल्नेहरूसँग सावधान : राजनीतिमा प्रभू दाहिना भए कुनै ‘माइकालाल’को तर्क चल्दैन ! - Jyotinews
उल्टो तर्क कोरल्नेहरूसँग सावधान : राजनीतिमा प्रभू दाहिना भए कुनै ‘माइकालाल’को तर्क चल्दैन !
नरेन्द्रजंग पिटर २०७७ चैत २० गते १७:००
अहिले मौसम खराब छ । खराब मौसममा धनजन, बालीनालीको क्षति हुनसक्छ । दक्षिणबाटै आएको धूलो तुवाँलोसँगै फेरि आएको कोरोनाले पनि ढोका ढकढक्याइसक्यो । मान्छेका स्वास्थ मात्रै हैन मति पनि भ्रष्ट हुन सक्छ । सामान्यजनमा औंसीपूर्णे लाग्न सक्छ । राजनेतालाई काडाँले पनि नकोरोस् ।
हो, मौसम खराब छ । तपाईंको जिज्ञासाको उत्तर, ज्ञानको खोज, आविष्कारको चाहाना, जीवन र जगतप्रतिको महाअध्ययन, अदृश्य भयको सामना, कर्महीन मिथ्या अपेक्षा, मानवसभ्यता र इतिहासको वस्तुवादी अध्ययन, विज्ञान र प्रविधि शिक्षाको सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष भनेकै विवेक र आलोचनात्मक चेत बढाउनु हो । मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न, सोच्न, बहसमा भाग लिन थालियो भने विषय नै फरक देखिन्छ । कुन ठाँउमा उभिएर कुन चश्मा लगाएर वस्तु र विषय हेर्ने हो त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसले समकालीन यथास्थतिमा रमाउने समाजमा समय छिचोल्न गाह्रो त पर्छ तर त्यसको महत्त्व समयसँगै हुन्छ ।
आज बिहानको गुड मर्निङ, ब्याड मर्निङ भयो । अचेल सूर्योदय हुँदैन । कोरना र तुँवालो हल बाँधेर आए । एकाएक मौसम बदलिएर बसन्तको आगमन भए पनि जाडोले छोडेन । कोपिला फक्रन पाएन, कोइलीको आवाज अझै सुनेको छैन् । बरु आज एकाबिहान फ्याउरो करायो । चैत महिनामा पनि बाक्लो ज्याकेट लगाएर हिंड्नुपर्ने । दिँउसोको घाम र रातिका जूनतारा धुलेपर्दाले छोपिए । आकाश निलो नभई खैरो भो । यो शुभसंकेत भने हैन । कस्तो हाम्रो भाग्य ? प्रदुषित राजनीति जस्तै धुले तुवाँला र कोरोना पनि दक्षिणबाटै आउनु पर्ने ! उफ । सीमारहीत भएर त्यताको विषालु विचारले त जागृत मान्छेको चेत हराएर बबुरा नै पारिदिएको थियो । चेसका गोटी चलेको तुवाँलोको पर्दामा पनि राजनीतिमा छर्लंगै देखिने… क्या । दक्षिणबाट आउने कोरोना त अझ शक्तिशाली हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भा’छ ।
मर्निङ वाकमा थिँए । मौसमविद डा.शर्माजी र फुटबल क्याप्टेन श्रेष्ठजीसँग सानै जिज्ञासामा ठूलै लफडा पर्‍यो । मान्छेको जात आफ्नै तरिकाले अरुले पनि सोचिदिओस् भनेर सोच्ने क्या…। डा.शर्मा पशुपतिबाट फर्किरहेका पिंगलास्थानमा भेटिए । मौसमविदसँग मौसमकै कुरा हुने नै भो ।
‘डाक्टर साब, यो तुवाँलो कैलेसम्म हट्ला ?’
‘अहिले भन्न सकिँदैन । पानी पर्नुपर्छ, त्यसलाई अझ मनसुन नै त कुर्नुपर्ने हो की !’
‘तपाईहरु त पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ नी…!’
‘हो, अहिले हामीले सूचनाप्रविधिमा त पहुँच बढाएका छौँ, तर अझै ठ्याम्मै मिलाउन भने सकिँदैन । कतिपय भगवान भरोसे पनि गर्नपर्छ । (रिसाँउदै) के नेपालका राजनीतिक–विज्ञानी, विश्लेषक र ज्योतिषले भनेको कुरा पुग्या छ र ? भन्नुस् त.. राजनीतिको तुँवालो कहिले हट्छ !’
(म ट्वाँ परें । नो जवाफ)
‘डाक्टरसाहब, तपाईहरु भगवान भरोसे नभै तथ्य र अवस्था विश्लेषणका आधारमा परिणामको पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ नी । मैले नेताहरु जस्तो गुगल ब्वाइ, कृष्णानन्द योगीलाई नभएर तपाईजस्तो विज्ञानीलाई पो सोध्या । अझ न्यायमूर्तिसँग त हुँदै हैन जो मागदाबी नभएको पनि दिन सक्नुहुन्छ । माननीयहरु समाजको मिजास र राजनीतिको नाडी छाम्न मात्रै हैन् आकाशवाणी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’
(मेरा तर्क र जिज्ञासालाई मन्दिरबाट फर्केका डा. शर्माले सहजै लिएनन् । जब मान्छेसँग तर्क सकिन्छ, मर्ममा प्रहार हुन्छ, तब रिसाउन थाल्छन् । उनी पनि तर्किए, झर्किए र फर्किए)
राजनीतिमा माहाभारत चलिरहेको बेला छापामार तरिकाले आएको कोरनाले अहिले भने राष्ट्रिय तामझाम देखाएन । सरकार, स्वास्थ–विज्ञान, स्वास्थ–सजगताको परीक्षा पूरा लिइनसकेको उसको यो सन्देश हो । कोरनाकालको सरकारी नीति, भूमिका, उठेका प्रश्नको जवाफ लिन पो फेरि आएको हो की ? कोरोनाले अन्य बहस तपसीलमा पारेको थियो । धरापमा परेको ओली सरकारलाई सन्जीवनी बन्यो । मार्क्सलाई घृणा गर्ने पनि यत्र, तत्र, सर्वत्र मार्क्सवादी बने । क्याप्टेन श्रेष्ठले मास्क लगाएको मलाई चिनिहालेछन् । यसै पनि डा. शर्माले मलाई खिन्न बनाएका थिए ।
बेलायतमा मौसमसम्बन्धी विषयबाट नै छलफलको सुरुवात हुन्छ तर नेपालमा भने धेरैजसो गफ राजनीतिबाट सुरु हुन्छ । मेरो कर्मबारे क्याप्टेन श्रेष्ठ भलिभातीँ परिचित छन् । नमस्ते साटासाट पछि उनले प्रश्न, जिज्ञासा, कौतुहलता र आफ्ना सोच पररर्र छाडिहाले ।
‘भन्नुस् त, अब राजनीतिमा के हुन्छ ? कस्तो देशमा जन्मिएछ ! कसैलाई विश्वास र आसै गर्न पनि नसकिने !’
‘साथी, मित्र र आफन्तलाई विश्वास गर्नुपर्छ । यो विपतकालमा निर्लज्जतालाई सहजतापूर्वक आत्मसात गर्ने समाजमा पनि मित्रलाइ गनिन्छ, तौलिदैँन । चैतमा जाडो भो, कोरोना फेरि आयो, महंगी बढदैछ, अरु के भनौँ र ! थाकल र काफल खान जाने मूड छ । कोइलीलाई सुन्नुछ । पालुवा फेरिएका वन, सुत्केरी भएका रुखहरु फेरी नियाल्ने मन छ ।’
‘म कवी हैन क्या… मैले त्यो सोध्या पनि हैन नरेन्द्र सर, अब राजनीतिमा के हुन्छ ? तपाईको विश्लेषणले के भन्छ ? भनेर पो !’
‘हेर्नुस् क्याप्टेन साहेब, तपाईहरुको रंगशालामा खेलका नियम हुन्छन् । रेफ्री हुन्छन्, साइड रेफ्री पनि । त्यतिले नपुगे अब त क्यामेरा रिप्ले पनि गराइन्छ । आवश्यकता अनुसार कार्ड दिइन्छ । खेलाडीले कतै ड्रग त लिएको छैन भनेर ल्याब टेष्ट गरिन्छन् । तर, राजनीति यस्तो खेल हो, त्यहाँ न केही नियम, न कोही रेफ्री, न कोही क्यामेरा रिप्ले, न ल्याब टेष्ट । राजनीतिमा त कहिले दुई दुई जोडदा ३ हुन्छ कहिले ५ । राजनीतिमा प्रेम गरेको र झगडा गरेको पत्तै पाइंदैन । कुनै नियम, विधि हुँदैनन् । त्यसैले यहाँ भविष्यवाणी पनि गर्न सकिँदैन । प्रभू दाहिना भइन्जेल कोही माइकालालको केही गल्दैन । हो बरु, खेलमा म्याच फिक्सिङ भने हुन्छ । त्यसको मार त नेपाली फुटबल पनि पर्‍यो, हैन र ?’
तमतमाएको अनुहार पार्दै कर्कशा स्वरले क्याप्टेन श्रेष्ठले भने – ‘हैन कसलाई चिन्ता हुँदैन र, राजनीति नै सबैको भाग्य र भविष्यको केन्द्र हो । सरोकार त हुने नै भयो । तपाईको क्षेत्र भएर पो सोध्या….। ’
आज साँच्चै मेरो साइत बिग्रिएको रहेछ । आफ्नै जिज्ञासाले मलाई कहिलेकहीँ टोक्छ, चिर्थोछ, घायल पार्छ । सोच्छ दिमागले, दुःख पाँउछ शरीरले । अझ किन र कसरी भन्ने थपिएपछिका आलोचनात्मक चेत सुखहरणका कारण बन्या छन् । शक्ति रिसाएर भाग्य खोसिए ।
तितो कुरा गरेको कसैले मन पराँउदैन् । छलफलको लामो विषयमा नजाँउ । आज डा. शर्मा र क्याप्टेनको भावनामा चोट पुग्यो । त्यो अझ राजनीतिका ठाकुरेसँग व्यहोरेको छु । कस्ता तर्क कोरल्छन ? त्यस्तालाई मान्छे कसरी थपडी मार्न सक्छन् ? ढलको पानीले नुहाउने की खरानी घस्ने ? माटो खाने कि आची खाने ? अरे !
छ्या….यस्ता प्रश्नको के जवाफ दिने ! गलत कुरा बोल्न थाल्नु र सही थाप्न थाल्नु भो भने अन्यन्त्र बोलिएको, लेखिएको सही कुरा पनि कसैले पत्याउँदैनन् । गलत कुरालाई तर्कवाणी दिनेको हैसियत मात्र छर्लङ्ग हुँदैन, जुन उदेश्यका लागि बोलिएको हुन्छ त्यो पनि ठट्टा बन्छ । गाली गर्नलायक पनि नभएकाको भावनामा चोट पुगेको देखेर म आज हर्षित पनि छु ।
माहामारी नौलो अनुहारमा आयो । मौसमको भविष्यवाणी गर्नेहरु यसै हो, यतिदिन रहन्छ भन्न सक्दैनन् । राष्ट्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा अर्बौंको सुन चढाएर क्षमापूजा गरिसक्नु भो । अब हामी भगवान भरोसामा ढुक्क हौँ, स्वस्थ हुन सक्छौ । पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् !
नरेन्द्रजंग पिटरका थप लेखहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।